राजनीति – Anurag Post
‘चुहिने घर’ भन्दै पार्टी छाेडेर हिँडेका बाबुरामकाे अाराेप- ‘प्रचण्डले पार्टी चलाउन नसकेर एमालेमा विलय भए’
May 19, 2018	राजनीति 0
पोखरा । पूर्वमाअाेवादी नेता तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी चलाउन नसकेर प्रचण्ड एमालेमा विलय भएकाे अाराेप लगाएका छन् । ‘माओवादी केन्द्र’ विघटन गरेर हालै एमालेसँग पार्टी एकता गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तास्वार्थकाे लाेभमा परेर पार्टी विलय गरेकाे डा. भट्टरार्इकाे भनाइ छ । अाज (शनिबार) बिहान पोखरामा …
४ वर्षदेखि नबनेको सडक ४ दिनमा बन्न सक्ने रहेछ तर ४ वर्ष जनतालाई किन दुख दिईयो ?
May 8, 2018	राजनीति 0
सरकार रमिता देखाँउदै छ । जहाँ जहाँ मोदी पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ नक्कली बिकास देखाइरहेका छन् । चाकडिको यो हदले शोभा दिएन । ४ बर्षदेखि नबनेको सडक ४ दिनमा बन्न सक्ने रहेछ भने ४ बर्ष जनतालाई किन दुख दिएको ? यो देश र यस देशका सडकहरु २ दिन आउने मोदी जी …
‘सांसदहरु देश र जनतालाई काम लाग्ने नीति होईन_आफुलाई काम लाग्ने नीति बनाईरहेका छन्’
May 5, 2018	राजनीति 0
नीति निर्माण गर्न जनताको भोट लिएर संसद छिरेका सांसदहरु देश र जनतालाई काम लाग्ने नीति होइन, आफुलाई काम लाग्ने नीति बनाइरहेका छन् । अब कुनै सांसद अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए उनको सांसद पद निलम्ब नहुने भएको छ । दर्शकहरुलाई स्मरण गराऔँ कि संविधान सभाको पहिल्यै …
‘जति ठुला माछा भएपनि त्यसको पर्दाफास गर्न हामी तयार छौं’
May 3, 2018	अनुराग पोष्ट, राजनीति 0
सुन्दा सुन्दा वाक्क दिक्क लागेपनि अहिले सुन भन्नु बाहेक अर्को न बिषय छ न चर्चा । राज्यको सुरक्षा, भन्सार, इमिग्रेसन, इन्टेलीजेन्स कति कमजोर छ भन्ने कुरा कट्टु पनि नलगाई नांगियो । एउटा सुकुल गुण्डाले फालेको दाना पानी खाएर देश प्रति गद्धारी गर्नेहरुको लर्को देख्दा लाग्छ इमान्दारीता पानी पनि पिउन नपाई …
‘मजदुर दिवसले १५/१८ घण्टा मजदुरी नगरी परिवार पाल्न सक्ने कसैलाई राहत दिएन’
May 1, 2018	अनुराग पोष्ट, राजनीति 0
आज मे दिवस । मजदुर दिवस । मजदुर दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना हुँदा चर्का चर्का नारा लागे, कार्यक्रम स्थलहरु सजिए, लाखौँ खर्च गरिए । एक बर्षका लागि काम पुग्यो । अब अर्को बर्षको मे दिवसमा यस्तै भव्य कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ । तगडा भाषण ठोक्नु पर्छ । मजदुरको नाम लिएर …
April 21, 2018	अनुराग पोष्ट, राजनीति 0
यो देशको सर्बाधिक सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो पर्यटन । तर हरीया डाँडा हिमालै हिमाल, तालै ताल छन् भन्ने मात्र तर्क ताल न शुर को भैसके । हो प्रकृतीले दिनुसम्म दिएको मुलुक हो तर नीति निर्माता र व्युरोक्रेसीले लिनु सम्म लिए पछि न हिमाल काम लागे न पहाड काम लागे न …
April 10, 2018	राजनीति 0
निजि स्कुलको भर्ना शुल्कले अविभावहरुको डाड भाँच्दै छ । कतिपय विद्यालयको मनोमानी यस्तो छ कि १ कक्षाको भर्ना शुल्क नै २ लाख । सरकारी बिद्यालयको शैक्षिक स्तर सबैलाई थाहा छ । केही अपवादलाई छोडेर सरकारी स्कुलका प्रोडक्टहरु ग्लोबल कम्पिटिशनमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी शिक्षालयहरमा न श्रोत साधन छन् …